ပျောက်ဆုံး ဆော်ဒီ သတင်းစာဆရာ ကောင်စစ်ဝန်ရုံးသို့ ရောက်ရှိမှုကို သက်သေပြရန် တူရကီသမ္မတက တောင?? - Yangon Media Group
အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က ဆော်ဒီအာရေဗျသတင်း စာဆရာ ခါရှိုဂီသည် ဒုက္ခတစ်ခုခုနှင့် တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်ဟု သတင်း များအရ မိမိသိရှိရပါကြောင်း ထုတ် ဖော် ပြောဆိုခဲ့သည်။ ”ကမ္ဘာတစ်ဝန်း သတင်းစာဆရာများသည် အကြမ်းဖက်ခံနေရသည်။ ယင်းကိစ္စမျိုး မဖြစ်သင့်” ဟု အမေရိကန်ဒုသမ္မတ မိုက်ပင့်က ၎င်း၏တွစ်တာမှတစ်ဆင့် ဖော် ပြလိုက်သည်။
မြန်မာငွေတန်ဖိုး ကျဆင်းသွားမှု အစိုးရ လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ရန် စီးပွားကူး သန်း ဒုဝန်ကြီးဟော??